Indlela yokufumana umsebenzi njengoTitshala oPhezulu weSikolo esiphakeme
Kubafundi nabazali Isikolo esiphakamileyo se-Inthanethi
Izifundo zeSiseko zeZikolo eziPhakamileyo zeSikolo
Ukufundisa izifundo ze-intanethi ezikolweni zaseburhulumenteni ziba ngumsebenzi wesikhathi esigcwele okanye indlela evuzayo yokuncedisa umvuzo wakho. Izikolo ezitsha eziphezulu kwi-intanethi ziqala rhoqo ngonyaka, kwaye ootitshala abaqeqeshiweyo kwi-intanethi bafunwa kakhulu. Ngokuqhelekileyo, abaqeqeshi abaqhelekileyo kulindeleke ukuba bajonge abafundi kwiikhosi eziliqela, izabelo zebakala , zisebenzisana ngeebhodi zemiyalezo okanye nge-imeyile, kwaye zifumaneke xa abafundi bebuza imibuzo.
Ikharityhulam yeeklasi ze-intanethi eziphakamileyo eziqhelekileyo zihlala ziqeshwe ngabafundi besikolo kunye nabafundisi be-intanethi kulindeleke ukuba balandele isilabhasi ethile kwikhosi nganye.
Indlela yokuFundela iSithuba seSchool High School Online
Izikolo ze-charter ze-intanethi zixhaswa ngemali kwaye zimele zilandele ezinye izikhokelo zombuso kunye nesigqeba. Ngokuqhelekileyo, ootitshala abakwi-intanethi abaqeshwe zizikolo zeemvumelwano kufuneka babe neenkcukacha zokufundisa ezivumelekileyo kwimeko yesikolo esekelwe kuyo. Izikolo ezizimeleyo kunye neekholejini zinokuguquguquka okukhulu ekuqeshweni, kodwa ziyakuthi zithande abafundisi be-intanethi ngeenkcukacha okanye umlando womsebenzi oncomekayo . Ootitshala abaphakamileyo be- intanethi ye-intanethi banamathuba okufundisa amaziko okufundela , ubuchule bezobuchwepheshe, kunye nezakhono zoqhagamshelwano ezibhaliweyo.
Kuphi Ukufumana Imisebenzi Ephakamileyo Yokufundisa Kwezikole kwi-Inthanethi
Ukuba ufuna ukuba ngumfundisi we- high school teacher , qalisa ngokukhangela imisebenzi kwindawo.
Qhagamshelana nezikolo ze-charter kwisithili sakho ukuze ubone ukuba ziqeshwe, thumela kwi-resume yakho, kwaye ulungiselele intetho yoluntu.
Emva koko, jonga kwii- high school izikolo ezibhalisa abafundi kumazwe amaninzi. I- charter enkulu ye- intanethi kunye nezikolo ezizimeleyo ziyakwamkela izicelo nge-intanethi.
Iinkqubo ezifana ne-K12 kunye ne-Connections Academy zineenkqubo ezifakwe kwiinkqubo ezimiselweyo. Ekugqibeleni, zama ukuzisebenzisa ngokubodwa kwizikolo ezincinci ezizimeleyo kwi-intanethi kulo lonke uhlanga. Ezinye zeenkqubo zibonelela ngolwazi lomsebenzi kwi-intanethi; abanye bafuna abasebenzi abanokukwazi ukuphanda ulwazi olufanelekileyo loqhagamshelwano kunye neefowuni ezimbalwa.
Indlela yokuma njengoMfundisi weZikolo eziPhakamileyo kwi-Intanethi
Isicelo sakho mhlawumbi asiyi kuba yedwa ehleli kwideskiti yesiqununu. Yima ngaphandle kwesihlwele ngokugxininisa amava akho okufundisa kunye nokukwazi kwakho ukusebenza kwindawo ekhompyutheni.
Ngethuba leprogram yesicelo, gcina ixesha elide kwaye uphendule iifowuni kunye ne-imeyile ngokukhawuleza. Gcina ubugcisa be-imeyile kodwa ungasesikweni ngokusesikweni. Sombulula nayiphi na ingxaki yezobugcisa (ezifana nemiba yokunamathisela i-imeyile okanye ubunzima bokufikelela kwizixhobo zokusebenza ze-intanethi) ngokukhawuleza. Ukususela kwimisebenzi yokufundisa i-intanethi yinto yonxibelelwano oluqhelekileyo, qwalasela konke ukusebenzisana nesikolo ithuba lokuzibonakalisa.
Izikolo eziPhakamileyo ze-Internet
Ngaba abaFundanga beZikolo eziPhezulu zeZikolo eziPhakamileyo abakwiiKholeji baya
Iinkonzo kunye neNgxowa-mali yokufumana i-Diploma yakho ye-High School
Indlela yokufumana i-Diploma yeSikolo esiphakamileyo se-Inthanethi njengoMdala
Iiklasi ze-GED zamahhala kwi-Intanethi
Uludwe lweZikolo zoLuntu zeZikolo eziHlazileyo kwi-Alabama Students, K-12
I-American Academy Profile
Izizathu ezi-7 zokuBhalisa umntwana wakho kwiSikolo esiQinisekisiweyo se-Inthanethi
Ukunyuka kwentaba iRainier: Intaba ephakamileyo kunazo zonke eWashington
Iimpawu zesingeniso esicetyisayo
Yintoni i-Hierarchy kwiGrama?
Iindawo zokungcwaba zaMongameli
Umthengisi weNgcaciso yeBhanki kwi-Intanethi
Imithandazo yokuBandezeleka nokulahlekelwa
Ngaba Ndingaba ne-Pet Pet College?
Unyaka Wokuqala weDodge Challenger RT
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: iTagliare
Iimbali eziPhambili eziPhambili zeMinyaka ephakathi
Imisebenzi yeklasini yabaFundi beZikolo eziQalayo
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: I-Diventare
Umpostile Andreya - Mzalwana kaPetros
I-Skateboard ye-Logos Pics Archive
Inkonzo yeNtloko yeSithuthuthu
Iingoma ezi-50 eziphambili zeRip ze-2011
I-Facebook Profile Hacker Isexwayiso
I-Acupressure Treasures: Tai Yang
Umehluko phakathi kweNtetho kunye neNtetho yoluntu